Kaalmaynta hooyada uurka leh - InfoFinland
Nolosha Finland > Qoyska > Kaalmada dhaqaale ee qoyska > Kaalmaynta hooyada uurka leh
Finland waxay qoysaska carruurta leh u taageertaa habab badan oo kala duwan. Tusaale ahaan baakadda hooyannimada ayaa ah caawimaadda loogu jecel yahay. Boggan waxaad ka heleysaa caawimaadaha aad codsan karto ka hor inta aanu cunuggu dhalan.
Baakadka hooyada uurka leh (äitiyspakkaus)
Haddii aad Finland ku nooshahay waxaad xaq u yeelan kartaa baakadka hooyada uurka leh (äitiysavustus). Kaalmada hooyadu waa adiga hadba midaad doorato baakadka hooyada uurka leh (äitiyspakkaus) ama lacag caliman oo canshuur la'aan ah. Kartoonkaas hooyada la siinayo waxaa ku jira dharka ilmaha yar iyo waxyaalo wax lagu daryeelo. Inta badan hooyadu waxay doorataa kartoonka, sababtoo ah waa ka qiimo badan yahay bedelka lacagta.
Xaq waxaad u leedahay kaalmada hooyada, markii
uurka yahay ilaa shan billood
soo martey baaritaan dhakhtar intaadan dhameysan ama aadan buuxin afar billood
ku jirtid Ceyminta bulshada Finland.
Baakadka loo soo diro hooyada uurka lehFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markaad uurka leedahay Kelada ayaa ku siineysa lacagta hooyonimada (äitiysraha).
Hooyadu waxay gashaa caadiyan fasaxa hooyanimo 30 maalmood ka hor waqtiga loo qabtey iney dhaleyso. Waqtigaasna hooyada waxaa la siiyaa lacagta hooyada. Isugeyn waxaa la siiyaa qiyaastii muddo 4 billood ah.
Waad codsan kartaa lacagta hooyada, hadaad ku jirto Ceyminta bulshada Finland iyo inaad ku jirtey ceyminta jirada Finland, ama wadamada midowga Yurub (EU) ama wadamada ay isku daqliga yihiin Yurub (ETA) ama Swizerland ugu yaraan 180 maalmood kahor waqtiga laguu qabtey dhalmada. Kelada waxay ku siineysaa lacagta hooyada waana isku sharuud sidoo kale ardeyda iyo shaqo laawayasha.
Kaalmada hooyada iyo codsashada lacagta hooyada
Ka codso Kelada kaalmada hooyada iyo lacagta hooyada ugu danbeyn labo billood kahor waqtiga laguu qabtey inaad dhaleyso.
Waad ka codsan kartaa kaalamada hooyada iyo lacagta hooyada boga shabagada Kelada. Waxaad ku galeysaa lambariska aad ku gasho shabakada bankiga verkkopankkitunnus ama aqoonsiga moobeelka mobiilivarmenne Waxaad ka heleysaa adeegaas xog sidaad u buuxin laheyd foomka. Isla ciiwaankaas ayaad ka arki kartaa hadba arrintaada xalkeedu meeshuu marayo. Markii la gaaro go'aanka codsigaaga, waxaad arki kartaa cadadda kaalmada aad heleyso iyo waqtiga aad heleyso. Adeegaas waxaad ku heleysaa afafka finnishka iyo iswiidhishka.
Sidoo kale waad codsan kartaa kaalmada hooyada iyo lacagta hooyada adigoo buuxinaya foomka warqada ah kadibna boostada ayaad ku diri kartaa wixii lifaaqyo oo dhana waxaad geyneysaa xafiiska Kelada. Rugta dhalaanka iyo hooyooyinka ayaad ka heli kartaa caawimo buuxinta foomka.
Xasuuso inaad wargeliso shaqo ku siiyahaaga fasaxa hooyanimo ugu danbeyn 2 billood intaadan gelin fasaxa.
Lacagta hooyada lasoo hormariyey
Haddii hooyadu rabto wey geli kartaa fasaxa hooyada kahor waqtiga loo qabtey iney dhaleyso 31–50 maalmo shaqo. Lacagta hooyaduna waxay u socon 4 billod laga soo billaabo maalintii loo bilaabey.
Lacagta hooyada gaarka ah
Haddii hooyadu ka shaqeyso meel hillaac sida raajada iyo walxaha kiimikada ama cudurada faafa, wey ka hari kartaa markaaba shaqada, markii lagu sheego uurka. Waqtigaasna waxaa la siinayaa lacagta hooyonimada ee gaarka ah (erityisäitiysraha). Xasuuso inaad ka codsato lacagta hooyada gaarka ah afar billood kadib laga soo billaabo maalintaad shaqada ka hartey.
Lacagta gaarka ee hooyada maba lasiiyo shaqo laawaha iyo siyaabo qaasa ardeyda.
Weydii faahfaahin dheeri ah Kelada.
Boga shabakada Kelada waxaad ka ogaan kartaa dhammaan kaalmooyinka, taasooy Keladu siiso reeraha ilmooleyda.